Ahaziri Rubber Products, ngwaahia Silicone Parts, Epdm Parts - Chengda
Anyị nwere a siri ike ngwaahịa imewe na ebu imewe otu, nwere ike ngwa ngwa ịzụlite na imewe elu-edu Ebu, na anyị nwere onwe anyị tooling ụlọ na silicone atinggha ụgha igwe, nwere ike na-emepụta na ngwaahịa na elu àgwà na nke ukwu na nke kasị nso oge. Anyị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ahụ site n'echiche, ma nwee ike ịnye ọrụ site na imepụta ngwaahịa, imepụta ebu, ịghapụta ngwaahịa, na mgbakọ ngwaahịa, mbukota wdg.
Ihe nyocha na ule
Dongguan Chengda Rubber & Plastic Technology Co., Ltd. emi odude ke Dongguan China, na mpaghara nke 5000 m², a ọrụ na-agba mbọ enterprise ọkachamara R & D ngwaahịa roba na silicone ngwaahịa. Tumadi na-etinye aka na ụdị ngwaahịa dị iche iche metụtara akụkụ eletriki, akụkụ eletriki, akụkụ ekwentị mkpanaaka, akụkụ ụgbọ ala, ngwa ọgwụ, ngwa kichin na ngwaahịa ụmụaka, yana ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Kedu uru nke oriọna silicone?
Kedu uru nke oriọna silicone? Silicone lampshade ka nke silicone na roba nke na-arụ ọrụ nke ọma, nke nwere njirimara nke ikpuchi ọkụ, nchebe radieshon na nguzogide okpomọkụ dị elu. Silicone oriọna ...
Theghọta ọdịiche dị n'etiti silicone sample ebu na mmepụta ebu? Na silicone ngwaahịa ụlọ ọrụ, mgbe e nwere ndị ahịa ọhụrụ na anyị ase-atụle imekọ ihe ọnụ, anyị ga-ajụ ndị ahịa ma nke a silica jel ngwaahịa ha ...
Magburu onwe roba na silicone ngwaahịa nnyocha na mmepe nke ọrụ ụlọ ọrụ